Qabsaa’otni Oromoo QBO irratti wareegaman haala kamiin yaadatamu? - Independent Oromia
Uummanni Oromoo, goototaa fi qabsaa’ota ilmaan isaa, kanneen qabsoo walabummaa biyya isaanii Oromiyaa fi bilisummaa saba isaanii Oromoof taasisan irratti wareegaman bifa kamiin yaadachuu qaba? Kaayyoon gootota wareegamtoota Oromoo yoom guuta? Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Gara giddu-gala Oromiyaatti bilbiluun, marii Oromticha tokko waliin taasifame.
Baqattoota Oromoo biyya Suudii Arabiyaa keessa jiraatan, kanneen kumaatamaan lakkaa’aman, Waxabajjii 10, 2021 irraa eegaluun Magaalota Jiddaa fi Riyaad keessatti hidhamnii gidirfamaa jiran keessaa kanneen kuma-lamatti tilmaaman tibbana gara biyyaatti galfamuu, kanneen mana hidhaa Suudii keessatti hafanii jiranis soorata ga’aa dhorkamuun haala hamaa mudachaa jiraachuu. Odeessa Oromticha biyya Suudii jiru tokko irraa bilbilaan arganne.